မင်းသားမျက်နှာဖုံးကွာကျလေသောအခါ ( အီဂျစ်တော်လှန်ရေး) – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on January 31, 2011 by kyawkyawoo	Posted in EgyptTagged ချစ်ခင်စွာ, တူနီးရှား၊အီဂျစ်၊ဂျော်ဒန်၊ယီမင်၊အယ်ဂျီးရီးယာ, တူနီးရှာ်၊ဂျော်ဒန်၊ယီမင်၊အယ်ဂျီးရီးယာ, မင်းသားမျက်နှာဖုံးကွာကျလေသောအခါ, သမိုင်းဝင်မဲ့လူထုလှုပ်ရှားအုံကြွမှူ, အီဂျစ, အီဂျစ်တော်လှန်ရေး, အီဂျစ်ပြည်, ကျော်ကျော်ဦး,ဲ့လူယဉ်ကျေးနိုင်ငံကြီး,်တော်လှန်ရေး, burmese muslim minority, Burmese Muslims, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority
အခုရက်ပိုင်းအာရပ်နိုင်ငံတွေမှာ တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှူတွေစူနာမီ လှိုင်းတွေလို တလုံးပြီးတလုံး
အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကအာရပ်ပြည်သူတွေအားလုံးဟာ အာရပ်တွေဟာ အနောက်မှာဝါဒဖြန့်သလို ခပ်တုံးတုံး ခတ်ညံ့ညံ့ လူတွေမဟုတ်ဖူးဆိုတာသက်သေပြတဲ့…
အမေရီကန် ၊အစ္စရေးနဲ့အနောက်အုပ်စု အားလုံးအငိုက်မိသွားတဲ့တော်လှန်ရေးကတော့ အီဂျစ်ပြည်သူတွေရဲ့အုံကြွမှူပါဘဲ။
ဒါကြောင့်အီဂျစ်မှာပြည်သူတွေအုံကြွတဲ့ အခါ ဒီမိုကရေစီဘိုးအေနိုင်ငံကြီးများအားလုံး ရဲ့အစိုးရမင်းများဟာ
အီဂျစ် အာဏာရှင်မူဘာရက်ဟာအမေရီကန်၊ ဂျူးနဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့….
မကြာမတင်က ဝိကီလိခနဲ့ အယ်ဂျာဇီးရာသတင်းဌာနတို့ရဲ့ဖွင့်ချချက်တွေက ဒီအာဏာရှင်တွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးကိုခွါချခဲ့ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီကို မြတ်နိုးပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဘာလို့မသိချင်ဟန်ဆောင်နေကြသလဲ ?
ရှင်းပါတယ်။ ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ ဝါဒကိုကျင့်သုံးတဲ့ မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွါးကိုသာကြည့်တတ်တဲ့မူဝါဒ..
ဟာကိုလိုနီခေတ် ကမူဝါဒအတိုင်း မပြောင်းမလဲပဲမင်းသားခေါင်းပြောင်းဆောင်းထားတာမို့လို့ပါ။
Frozen Moment of History in Egypt